Marka laga hadlo kobcinta dhaqaalaha, wadaadku warmo soo gurta,xadiisyo daleeshada in furista bangiyadu xaaraan tahay . Marka haween jelecsan , guryahoodi hurda, cawradoodi muuqato,ay niman afduubani qafaashaan , wadaadku ma hadlo, kitaabna ma furo, xadiisna ma akhriyo. Macnahu waxa weeye , wadaadku ficilkaa wuu taageersanyahay “ Silence is consent “ Waxaynu dhawaan aragnay qof dumara oo ilmaynaysa oo saqdi dhexe gurigeeda ugu soo dhaceen niman afka xidhan oo la yidhahdo RRU . Saygeedu Burco ku maqnaa ,ayaduna Hargeisa ayay joogtay.Shareecada ma ogoshahay iqof dumara oo cawradeedu muuqato in saq dhexe guriga lagu jebiyo ? Waxaynu saaka arkaynaa in Saado Dheer saqdii dhexe guriga lagu jebiyay ayadoo huruda oo aan denbi faraha kula jirin. Denbiga ay gashay waa xisbi mucaarad ah oo ay u degorogotay . Shareecada iyo dhaqankeena suubani ma fasaxayaa in qof dumara oo hurada dayrka looga dhacao. Miyaanay ahayn kufsi dawladeed “ Government rape ?
Madaxweyne Siilaanyo wuu maqanyahay oo koome dheer ayuu weli “ Coma “, goor uu soo kicina , allahu yaclam. Wasiirkii daakhilgu muraayad ayuu hortaganyahay ,goor uu iska xiisa dhicina, allaahu yaclam.Amarka RRUda waxa bixiya Marwo Amina Weris oo ku jirta ficiltan dumar & hadaanan cagtayda ku gelin. Ciidamada RRU waxay la mid noqdeen Dabar-jebintii Siyaad Barre, German SS , Russian KGB iyo Mussolini SIS ” Servizio Informazioni Speciali”